URa'eese Aleem uziva ngathi yimini yanamhlanje uMarvin Hagler
21 EyeDwarha 2021
URa'eese Aleem uziva ngathi ngumhla wanamhlanje uMarvin Hagler
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Ra'eese "Irhamncwa" Aleem, URa'eese Aleem	0
Umlo we-Prince Ranch Boxing ongoyiswanga we-122-ponti, u-Ra'eese “Irhamncwa” Aleem (18-0, 12 KOs), ubekwe kwindawo #1 yi-WBA, inokuba ngowona bunzima bubalaseleyo emhlabeni, kodwa ufuna ukungqina oko.
“Ndiziva njengoMarvin Hagler, akukho namnye kwaba bafana ofuna ukulwa nam,” utshilo u-Aleem, osandula kuphulukana newonga lehlabathi leWBA super bantamweight esekelwe kutshintsho lomthetho embuthweni. “Ndenza yonke into ecelwa kum, ndilwela imali encinci, umngcipheko omkhulu, kwaye ndidlala imidlalo enika umdla, kodwa iintshatsheli azizukujongana okanye zindikhankanye. Kufuneka ndenze ntoni... ndifowunele uSenator waseMichigan okanye waseNevada, kwaye uzame ukuba bandincede, kuba ndingumntu olwela amabhaso, kwaye ndifuna ukulwa abona bangcono.”
U-Aleem, ophulukene nebhanti lakhe, emva kokuba i-WBA idibanise iintshatsheli zayo, yazibona njengendoda engaqhelekanga ngaphandle kwitumente ye-robin ejikelezayo phakathi kukaStephen Fulton kunye noBrandon Figueroa, abajonge ukudibanisa izihloko ezibini kwezine kwicandelo. Ngaphandle kwelo bhanti, uAleem, owayesele enengxaki yokufumana imilo, ngoku uziva ngathi kuye kwanzima ngakumbi.
“Ndifuna ophumeleleyo uStephen Fulton equbisana noBrandon Figueroa, ndifuna ophumeleleyo uMurodjon Akhmadaliev ngokuchasene noRonny Rios…ndidubule ukuba andikwazi ukuyifumana le milo, ndiza kunyukela kudidi losiba ndilwe no-boogeyman welo candelo, uEmanuel Navarrete, kwaye ukuba oko akusebenzi ndingamkela uNaoya Inoue ngovuyo kwi-122 lbs. iyantlukwano ngokunjalo,” waqhubeka uAleem. “Kweli xesha, amaxesha amaninzi abalandeli baye baxakwe yinto yokuba abalweli bengayibizi imilo emihle, kodwa ndihlaba ikhwelo kuwo wonke umntu okwicandelo lam onebhanti. Ndibekwe kwindawo #1 yi-WBA, kodwa akukho mntu ulikhankanyayo igama lam, ndingasathethi ke ngokuzama ukulwa nam. Ndiphoxekile kuba ndiyazi abalandeli bayasithanda isitayile sam, andikruquki, kwaye ndifuna ukulwa ngeyona ndlela ibalaseleyo, ndiyazi ukuba ndingcono kunabo bonke.”
NgoJanuwari walo nyaka, uRa'eese Aleem wafumana inqaku elincomekayo lokunkqonkqoza ngokuchasene ne-Vic Pasillas, wamlahla izihlandlo ezine ngaphambi kokuba ammise kumjikelo weshumi elinanye. Yayiluloyiso olwaguqula iintloko ezininzi kumnyhadala we-Showtime Championship Boxing, kunye nomdlalo ophambili nguStephen Fulton ngokuchasene no-Angelo Leo. Nangona kunjalo, u-Aleem ngoku ucwangciselwe ukuba abuyele ngoNovemba 27th kwi-Showtime co-main event ephethwe nguStephen Fulton vs. Brandon Figueroa, eyenzeka kwiPark MGM eLas Vegas, Nevada.
“Ndijongene no-Eduardo Baez kumlo wam olandelayo, kwaye ungumlweli olungileyo, kodwa ndizibona ndingumlo oxabisa isigidi seedola, kwaye masinyaniseke, ayilohlobo lomlo abanomdla kulo abalandeli,” utshilo. uphoxekile uAleem. “Ndiyamhlonipha uBaez, kwaye ndiyazi ukuba uyeza ukuza kulwa, kwaye ndiyakuvuyela ukuba nomlo, kodwa ukuze ndifikelele apho ndizibona ndikuyo, ndifuna omnye wale milo mikhulu. Ndikwinqanaba lam ngoku, kwaye ndiyilungele inqaku lam lesihloko. "
U-Aleem, osuka eMuskegon, eMichigan, wafudukela eLas Vegas, eNevada kwiminyaka eyadlulayo ukuze aleqe iphupha lakhe lokuba yimbethi manqindi kunye nentshatsheli yehlabathi.
“Ndincame ubomi bam obuninzi ukuze ndibe nethuba lokuphumelela intshinga yehlabathi, kwaye ngoku ndilwa nomfana ongafakwanga nakuluhlu lweWBA,” uvale ngalo mazwi uAleem. “Ndifuna ithuba lokulwela intshinga yehlabathi ngoba amanqindi bubomi bam. Ngokungafaniyo noHagler, ukuba bandinqumle intloko, baya kufumana iglavu enkulu yamanqindi kuyo, kwaye ngoku ndifuna nje umntu oqinisekileyo emva kokukholelwa kwizakhono zabo kunye nebhanti lokulwa nam. Ndivakalelwa kukuba uVic Pasillas wayengoyena mlweli ubalaseleyo kwicandelo kwaye emva kokuba ndimbethe, akukho mntu ufuna ukulwa nam. Ndifuna nje ukwazisa wonke umntu okwi-PBC, kunye nexesha le-Showtime ukuba ndilambile, kwaye ndiza kuqinisekisa yonke imilo xa ndingena eringini.”
Bhalisa kwi-eyethu Isiteshi seYouTube esitsha (ividiyo yakutshanje engezantsi) kunye neendaba zamanqindi zakutshanje kunye neziphumo, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje umfanekiso ongezantsi okanye nayiphi na imifanekiso kuyo yonke imidiya yethu yoluntu:
Oscar Rivas vs. Ryan Rozicki Bridgerweight iintsimbi zekhadi evela Canada	U-12-0 u-Rosalinda Rodriguez utyikitya ngokunyusa amaPunch
UMuhammad Waseem ujongene noRober Barrera eDubai ngalo Lwesihlanu
UCanelo no-Ilunga Makabu badibana okokuqala phambi komlo ngo-2022
UJay Harris ujongene noHector Gabriel Flores eCardiff, eWales kulo Lwesihlanu
UMassey woyisa uLaggoune kwisihloko se-IBO seHlabathi kunye neziphumo zekhadi elipheleleyo
UTeofimo Lopez: UThixo uya kumthoba uKambosos Jr